Foomamka Xubnaha & Qalabka - Caymiska Caafimaadka Degaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Foomamka Xubnaha & Qalabka
Si degdeg ah u hel waxaad u baahan tahay
Waxaan u abuurnay boggan si aan ugu fududeyno xubnaha CHPW Apple Health (Medicaid) si ay u helaan agabka ay u baahan yihiin. U calaamadee boggan si aad si degdeg ah u hesho foomamka iyo qalabka sida caadiga ah loo isticmaalo, dhammaan hal meel.
Codsiga Racfaanka Xaashida daboosha
Si aad u soo gudbiso rafcaan adeega la diiday ama lacag bixinta (marka lagu daro dukumentiyada taageeraya).
Sahanka Qiimaynta Caafimaadka - Xidhiidhka soo socda dhawaan
Wax badan nooga sheeg naftaada iyo baahiyahaaga caafimaad, markaa Waxaan kaa caawin karnaa inaad sameysid qorshooyinka daryeelka shakhsi ahaaneed taasi waxay kaa caawinaysaa inaad dareento sida ugu fiican.
Kaararka Caawinta Luuqadda "Waan ku hadlayaa".
Kaararka la daabici karo si ay u caawiyaan shakhsiyaadka codsanaya tarjumaada. Waxaa lagu heli karaa Carabi, Cantonese, Mandarin, Ruush, Soomaali, Isbaanish, iyo Fiyatnaamiis.
Foomka Ogeysiiska Uurka
Si aan u ogaano inaad rajaynayso inaad dhasho, oo aad noo saxiixdo Adiga oo Caafimaad qaba, Ilmo Caafimaad qaba barnaamijka.
Qalabka Raadinta Ogolaanshaha Hore
Qalabkani wuxuu kaa caawin karaa inaad go'aamiso haddii nidaamka aad u baahan tahay ogolaansho ka hor CHPW
Warbixinta Dhacdada Asturnaanta / Amniga
Si aad uga warbixiso dhacdo aad aaminsantahay in loo tixgalinayo jebinta sirta ama amniga.
Foomka Bixinta Aragtida
Si aad u codsatid in loo soo celiyo kharashaadka Aragga Sare ee jeebka ka baxsan ee la xidhiidha caymiska Apple Health (Medicaid) ee da'da weyn ee 21 ama ka weyn.
Foomamka Macluumaadka Caafimaadka Dhawrsan (PHI).
Oggolaanshaha Shaacinta Macluumaadka Caafimaadka Dhawrsan (PHI)
Si aad u oggolaato qof aad taqaan inuu kula hadlo CHPW isagoo ku hadlaya magacaaga.
Oggolaanshaha Siideynta Macluumaadka Isticmaalka Walaxda (SUD).
Si aad u ogolaato qorshaha inuu la wadaago macluumaadka ku saabsan SUD dhakhtarkaaga iyo in la bixiyo sheegashooyinka.
Codsiga Xisaabinta Shaacinta PHI gaaga
Si aad u waydiiso CHPW dhammaan wakhtiyada PHI-gaaga la siidaayay qof aan adiga ahayn.
Codso inaad gasho PHI-gaaga
Si aad taariikhdaada PHI ugu aragto CHPW.
Codso inaad saxdo PHI-gaaga
Si aad wax ugu saxdo diiwaankaaga caafimaadka rasmiga ah ee CHPW.
Codso in la xaddido siidaynta PHI-gaaga
Si aad u weydiiso CHPW inaysan macluumaadkaaga la wadaagin dadka kale.
Sida loo gudbiyo
Fadlan raac tilmaamaha ku qoran foomka aad isticmaalayso, oo ku soo gudbi adigoo isticmaalaya:
E-mail: ku kaydi dukumeentiga qalabkaaga, ku buuxi si waafaqsan tilmaamaha, oo iimayl u dir [emailka waa la ilaaliyay] ama cinwaanka ku qoran foomka.
Mail: daabac dukumeentiga, ku buuxi si waafaqsan tilmaamaha, saxeex foomka, oo u dir boostada: CHPW, ATTN: Adeegga Macmiilka, 1111 3rd Ave, Suite 400, Seattle, WA 98101.
Haddii aad hayso su'aalo, aadan heli karin waxaad u baahan tahay, ama aad u baahan tahay nuqul adag oo ah alaabta laguu soo diro, fadlan la xidhiidh Adeegga Macmiilka: 1-800-440-1561 (TTY: 711), Isniin ilaa Jimce, 8:00 subaxnimo ilaa 5:00 galabnimo
Waxa kale oo aad rabi kartaa inaad sahamiso agabkan dheeraadka ah:
Su'aalaha Inta badan La Isweydiiyo (FAQs) bogga - jawaabaha su'aalaha caadiga ah ee xubnaha CHPW Apple Health (Medicaid).
CHNW Cascade Select Resources - macluumaadka loogu talagalay xubnaha CHNW Cascade Select
CHPW Medicare Advantage Resources - macluumaadka loogu talagalay xubnaha CHPW Medicare Advantage
INTA BADAN KA BARO
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Maarso 7, 2022